छोरीको साथमा हुने पिता संसारकै भाग्यमानी ! यस्तो छ कारण ? - Lekbesi Khabar
छोरीको साथमा हुने पिता संसारकै भाग्यमानी ! यस्तो छ कारण ?
काठमाडौं : हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरीलाई हेलाको नजरले हेर्ने गरिन्छ। तर छोरीले आमा ,बुबाको जीवनमा खुशी भर्नुका साथै बुबाको उमेर केही वर्ष बढाउँने गर्छिन । पोल्याण्डको जागिलोनियन युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनमा छोरीहरुका बुवाहरू छोरी नभएकाहरू भन्दा बढी बाँच्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । उक्त अध्ययनले छोरीभएको घरमा उसको बुबाको उमेर ७४ हप्ता बढ्ने गरेको बताइएको छ । त्यसैले छोरी हुने बुबाको लामो आयु हुन्छ।
विश्व विद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले बुबाको स्वास्थ्य र उमेरको प्रभाव जान्नका लागि ४,३१० जनाको डाट संकलन गरेका थिए । २१६३ बुबाहरूले भाग लिएका थिए । अन्वेषकहरूले पहिलेको अध्ययन बच्चाको जन्म पछि आमाको स्वास्थ्य र उमेरको बारेमा गरिएको बताएका छन् । विश्वविद्यालयका एक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार छोरीहरू भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने बुबाहरूले आफ्नो जीवनको केही वर्ष आफै घटाएको बताएका छन् ।
छोरीको जन्म बुबाको लागि खुशीको खबर हो, तर आमाको लागि होइन। किनभने मानवीय जीवविज्ञानको अमेरिकी जर्नलमा गरिएको एउटा पहिलो अध्ययनले छोरा र छोरी दुबैको आमाको स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पर्दछ र उनको उमेर घट्ने गरेको बताइएको छ । पहिलेको अनुसन्धान पनि त्यस्तै दाबी गर्दछ । एजेन्सी
११ मंसिर २०७६, बुधबार ०८:४० November 27, 2019
प्रेस रिभ्यू : भेन्टिलेटरमा राखेर प्रमको उपचार, भएको के हो ?
ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी पछि झुके मेडिकल कलेज !